Shiinaha XBD Taxanaha Laba-nuugista Soo Saarida Dab-demiska iyo alaab-qeybiyeyaasha. KAIQUAN
Taxanaha XBD korontada jiifa laba jibaaran bamka dabka waa shey ay soo saartay shirkadeena iyadoo loo eegayo baahida suuqa. Waxqabadkeeda iyo xaaladeeda farsamo waxay buuxineysaa shuruudaha heerka qaran ee GB 6245 bamka dabka.
Taxanaha XBD korontada jiifa laba jibaaran bamka dabka waa shey ay soo saartay shirkadeena iyadoo loo eegayo baahida suuqa. Waxqabadkeeda iyo xaaladeeda farsamo waxay buuxineysaa shuruudaha heerka qaran ee GB 6245 bamka dabka. Badeecadaha waxaa tijaabiyey xarunta kormeerka iyo hubinta tayada diyaarinta ilaalinta dabka qaranka, waxayna dhaafeen qiimeynta alaabooyinka cusub ee Shanghai, waxayna heleen shahaadada ogolaanshaha sheyga ilaalinta dabka ee Shanghai.
XBD taxanaha korantada laba jibaaran ee korantada dabka ayaa leh qulqulo cufan iyo qeexitaanno cadaadis, nooc ballaadhan oo ballaaran iyo cufnaan sare. Mashiinka danabku wuxuu leeyahay xulashooyin badan oo kala ah 380V, 6000V iyo 10000v, kuwaas oo si fiican ula qabsan kara baahida dabka iyo xulashada naqshada ee dabaqyo kala duwan iyo caabbado tuubbo ah.
XBD taxanaha heerka korantada wuxuu furan yahay laba nuugid bamka waxsoosaarka alaabtu waxay gaarayaan heerka hogaaminta gudaha, qaab dhismeed macquul ah, buuq hooseeya, waxqabad aad u fiican, howl lagu kalsoonaan karo iyo faa'iidooyin kale.
Xawaare: 1480/2960 rpm
Danab: 380V, 6KV, 10KV
Ballaca: 150 ~ 600mm
Heerkulka dareeraha: ≤ 80 ℃ (biyo nadiif ah)
Baaxadda Awoodda: 30 ~ 600 L / S
Baaxadda cadaadiska: 0.32 ~ 2.5 Mpa
Cadaadiska nuugista ugu badan ee la oggol yahay: 0.4 Mpa
Hore: XBD-DP Taxanaha Bamka Dab-demiska
Xiga: Taxanaha XBD Vertical Long dhidibka Dabka saar